Saturday May 02, 2020 - 12:17:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ajaanibta soo duulayaasha ah ee ku sugan dalka Soomaaliya ayaa noqday isha koowaad ee dalka ku faafinaya caabuqa dilaaga ah ee Carona Virus.
War rasmi ah oo kasoo baxay Ururka Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in qaar kamid ah howlwadeennadooda ku sugan Soomaaliya uu soo ritay cudurka halista ah ee Carona Virus.
Nicolas Berlanga oo ah Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa war uu ku qoray bartiisa Twitterka ku sheegay in sedax kamid ah shaqaalahooda uu Carona kusoo ritay magaalada Muqdisho islamarkaana lageliyay xaalad Karaantiil ah.
Wuxuu sheegay in ay Karaantiileen dhammaan dadkii ay xiriirka lasameeyeen sedaxda qof ee kamid ah shaqaalahooda laga helay caabuqad Covid19,qofkii ugu horreeyay ee Carona soo geliyay Soomaaliya ayaa ahaa nin ushaqeynayay Q.Midoobe kaasi oo ku sugan xerada Xalane.
Taliska ciidamada AMISOM ayaa dhowaan sheegay in askari Yugaandheys ah oo ka howlgala dekadda Muqdisho laga helay Carona Virus, culimaa'udiinka soomaaliyeed iyo dhaqaatiirta ayaa horay uga baaqay in shacabku ka fogaadaan ajaanibta oo ah isha faafinaysa cudurada halista ah sida Covid19 iyo Aids.